Qiso: camal la'aantu ka dhigtey maal qabeen – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Qiso: camal la’aantu ka dhigtey maal qabeen
Gabadha Joanne Rowling oo u dhalatay dalka Ingiriiska ayaa u safartay dalka Bortiqiiska si ay uga hesho shaqo macalinimo. Halkaasi ayay ku guursatay nin, laakiinse sanad ka dib waa ay kala tegeen ninkii ka dib markii ay u dhashay gabadh. Markii noloshii ay ku adkaatay ayay Dalkeeda dib ugu soo noqotay iyadoo ah hooyo iyo gabadheeda yar.
Joanne Rowling waxay isu aragtay markii ay shaqo weyday ee xaalkuna ku xumaaday inay nolosha ku fashilantay waxaana ku dhacay xanuunka werwerka sida darteed waxay goosatay inay nafta iska jarto oo dunida Aakhiro ku biirto ِ ِ. Laakiin wakhtigaasi nasiib wanaag xukuumadda ayaa u oglaatay inay qaadato lacagaha kaalmada ah ee la siiyo dadka baahan.
Waxase Joanne Rowling ay ku fikirtay inay qoraalo samayso waayo arinkaasi ayay hiwaayad u lahayd. Waxaana ay bilowday qoraalka iyadoo soo saartay silsilad buugaagta Hary Poter oo aad loo jeclaaday qisaska ku qoran.
Sanadkii 2004 waxa ay noqotay qoraa aad loo xiiseeyo buugaagtiisa waxaana ay ka heshay hanti gaadhaysa bilyano doller ah. Joanne Rowling Waa qoraaga ugu badan ee dunida buugaagta silsilada ah ee ay qortay aad loo iibsado taariikh ahaan. Waxaana buugaagta silsiladad ee ay qortay la iibsaday 500 milyan oo nuskhadood (copy).
Previous articleHargeysa: Xafad Go’doonsaneyd oo Wado Baneyn loo Sameeyay
Next articleArinka Caruurtu Waa Ku Dayasho ?
Isbedelka madaxda Maxkamadda ICJ